Trano hazo iray no niandohan’ny afo ary namely ireo trano 192 manodidina azy avokoa ka ny 122 isa tamin’ireo dia trano biriky avokoa. Ankizikely no tao amin’io trano nipoiran’ny afo io raha araka ny fantatra raha saika tsy nisy olona avokoa teo amin’ny manodidina. Saika nivarotra tany an-tsena avokoa mantsy ireto farany noho izao fahatongavan’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao ka efa niitatra be ny afo vao nihazakaza nanavotra ny fananany avokoa ireto farany. Indrisy anefa fa ny teny an-koditra sisa no tavela, antony nahatonga ireo traboina 500 isa natory teny amoron-dalana avokoa afaka omaly alina. Tonga nijery azy ireo sy nanatitra fanampiana toy ny vilany, savony, sotro sy lovia, lamba firakotra… ho azy ireo omaly ny Ministry ny ati-tany sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ( BNGRC). Ankoatra ireo fanampiana ireo izay niampy voamaina sy legioma ary fotsim-bary dia fantatra fa hanome trano lay ho an’ireo traboina ihany koa ny ministera hatorian’izy ireo miampy lafika hahafahana miaro amin’ny hamandoana sy ny fofon’afo izay marihina fa tena miakatra be tokoa. Tsiahivina moa fa olona roa no naratra tamin’ity haintrano ity raha lela-vola 1.400.000 Ar no may tsy azo hampiasaina intsony.